Chipiri, April 6, 2010 Mugovera, June 27, 2015 Matt Chandler
Kunzwa kunonyudza mudumbu mako kunogona kunge kuri kuuya kubva kubhurawuza rako. Usatarise izvozvi, asi Google inoronga kuburitsa browser yebrowser iyo inobvumidza vashandisi kuti vasarudze kubva mukuteedzerwa ne… Google Analytics.
Google, inotungamira yekutsvagisa mupi uye iyo horsepower kuseri kweakakurumbira Google Analytics web traffic analytics chishandiso, iri kuzobvumira vashandisi kuti vadzivise kuteverwa nechombo chavo.
Izvi zvinounza mibvunzo yakati wandei uye zvingangoitika kune vatenzi vewebhu uye vashambadzi vewebhu vanoshandisa Google Analytics kuteedzera traffic traffic, kunyanya mashandisiro eplugin achakanganisa kuunganidzwa kwenzvimbo traffic data. Izvi zvinokumbira mumwe mubvunzo unonyanya kukosha: nei Google ichiita izvi kana Google Analytics isingaunganidze dunhu rako pakutanga?
Chekutanga zvinhu zvekupedzisira, zvinoenderana nezvinogona kutariswa pachedu data. Yako ISP ruzivo uye nzvimbo yenzvimbo kuverenga sewe wega? Google Analytics haina kuunganidza yega IP kero, zvichireva kuti ruzivo rwese rwunoteedzerwa haruzive zvachose.
Izvi zvinoisa Google muchikamu che vanyengeri zvachose sezvo ivo vachigona kuchengeta isingazivikanwe zvinyorwa zvevashandisi 'nhoroondo yekutsvaga? Zvichida. Nhoroondo yekutsvaga inobvumira Google kuti ibudise izvo zvinoshamisa zvinoshamisa zvawakatsvaga, uye nepo ivo vakaita kuti zvive nyore kusarudza kubva pachinhu ichi pamwe nechavo Privacy Center, havanyatso kubuda munzira yavo kushambadza mukana uyu. Izvo zvakare zvinotakura kutaura kuti rakavanzika boka rakabvunza iyo Federal Trade Commission kuti vhura kuferefetwa kuGoogle Buzz, saka Google inogona kunge ichiruma zvishoma pane zvakavanzika kumberi.
Mheremhere yavepo voluminous uye yakakwirira chimiro, asi mhinduro yangu yekutanga yaive Saka? Vangani vanhu vari kutoziva kuti vane Google Mbiri, ndoda kuti vagadzirise iyi mbiri uye vagadzirise yavo yekuvanzika uye zvisarudzo zvavanofarira? Ini ndakanga ndisingakwanise kukurumidza kutsvaga chero dhata, asi chii chikamu chevashandisi vewebhu vanoshandisa iyo AdBlock Plus plugin yeFirefox? Zvichida haina kukwana zvakakwana kuiisa kunze kwekutsauka kwakazara.
Pfungwa yangu yekutanga ndeyekuti kune vewebhu uye vatengesi, danho iri rinogona kutengesa zvimwe kunyorera Omniture uye WebTrends sevaya vedu vari kuseri kweketeni vanoda kuwana dhata rakawanda sezvinobvira. Asi iko kufamba kungave iko kupfugama mabvi kuchinetso chisati chave- uye chingangodaro chisipo.
Tags: Analyticsftcgoogle analyticsomniturekubudaprofilepasocial media nhasiventurepadzvideo
Ndivanaani Vateereri Vako Vechokwadi?
Google Analytics iri munzvimbo yakaoma. Kune rimwe divi, ivo ndevoga - vachipa yega yakasanganiswa Adsense uye Analytics mhinduro pamusika. Ivo vanofanirwa kumanikidzwa kusangana nechero analytics mupiki. Kune rimwe divi, ivo havagone kuita kumwe kwekubatanidzwa kukuru (kureva. Facebook Analytics naWebtrends) nekuti vanokwikwidza. Iyi inongoratidzika kunge mbeveve, hazvo.
Ndinovimba Webtrends anofunga kuti uku ndiko kuita kwako kuti uwane imwe helluva bhonasi.
Ehe, Pat East kuHanapin anga achitaura tweeting 'bout izvi munguva pfupi yapfuura. Kutanga Wave, kozoti Buzz, iko kutsigira kweCaffiene, ikozvino izvi?
Zvinoita sekuti ivo vari kuyedza kuchengetedza kubva kune monopoly nekuparadza zvigadzirwa zvavo kusvikira vamwe vabata.
Zvakanaka izvi hazvina kunaka, kunze kwekunge vaine nzira yekutevera vanhu vachishandisa kodhi yekudzivirira. 🙂
Mukuona kwedu kweAmerica zvekuvanzika izvi hazviite zvine musoro, asi kuitira kuti Google Analytics ive yakamira zvakanaka munyika dzeEurope (idzo dzave kubvunza ma analytics vatengesi zverudzi urwu rwekusarudza), Google mutungamiri. Pamusoro pezvo, shanduko iyi inobvumidza Google Analytics kuti ishandiswe kunzvimbo dzehurumende (sezvo inonamatira kuUS goverment mirayiridzo yekuvanzika).
Funga nezvazvo sehutungamiriri neimwe nzira. Iyo ine chekuita nevatengesi, asi ini ndinofunga nekufamba kwenguva, mirawo yehurumende ichabata kusvika kune ma analytics vatengesi vasingape chimwe chinhu chakafanana neiyi inosarudzika nzira.
Inonakidza nzvimbo. Ini ndakanga ndisina kufunga nezve misika yeEuropean. Ndatenda nekuziva.